Online တွင် တူတူပုန်းတမ်းကစားခြင်း
အွန်လိုင်းတက်ပြီး GTalk မှာ chatting လုပ်ကြတဲ့အခါ ကိုယ့်ကို သူများမမြင်အောင် ပုန်းနေ၊ ၀ှက်နေလို့ရပါတယ်။ စကား(Voice)တော့ ပြောလို့မရပါဘူး။ Text အနေနဲ့ပဲ chatting လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
စက္ကန့်နှင့်အမျှ သေလောက်အောင် အလုပ်များသူများ သို့မဟုတ် မိမိရဲ့ ချစ်သူ ကောင်လေး၊ကောင်မလေးနဲ့ ပြောနေတုန်းမှာ တစ်ခြားသူ လာနှောက်ယှက်တာ မခံချင်သူများအတွက် အထူးပြုလုပ်သင့်ပါတယ် :P လူတော်တော်များများလည်း သိပြီးသားပါ။ ဒါ့ကြောင့်မို့ သတိမထားမိတဲ့သူတွေ မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဦးစွာ Invisible လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် သိထားရမည့်အချက်မှာ မိမိအသုံးပြုသည် Gmail Version သည် Newer Version ဖြစ်ရပါသည်။ Newer Version ဖြစ်မဖြစ် သိနိုင်ရန်အတွက် Gmail သို့ login လုပ်ပြီး Browser ၏ top right corner မှ စာသားကို ကြည့်ရုံဖြင့်သိနိုင်ပါသည်။ Newer version မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင် Newer Version စာသားလေးပါတဲ့ Link list လေးကို အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရမှာပါ။
မိမိ Gmail login မှာ အဲဒီ Newer Version လေးပဲ ပေါ်နေရင် လုပ်လို့မရသေးတဲ့အတွက် Newer Version ဖြစ်အောင် စာသားကို Click နှိပ်ပြီး gmail newer version သို့ပြောင်းလဲရယူပါ။ ထိုသို့ပြောင်းလဲရယူပြီးသည့်နောက်မှာတော့ Newer Version ဆိုသည့်နေရာမှာ Older Version ဆိုတဲ့ စာသားလေးကို ပြောင်းလဲတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး မိမိ Gmail page ထဲက chat status ကို click နှိပ်ပြီးကြည့်လိုက်တာနဲ့ invisible ဆိုတဲ့ စာသားလေးကို တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တူတူပုန်းတမ်းကစားချင်သူ၊ ပုန်းရှောင်ချင်သူများအတွက် အဲဒီ Invisible status လေးကို ရွေးချယ်၍ စပြီး ပုန်းနိုင်ပါပြီ။
တစ်ခုရှိတာက မိမိကစပြီး chatting လုပ်ရင် တစ်ခြားသူဆီမှာ offline ဖြစ်နေတဲ့ gray cross button ကြီးနဲ့ စာသားတွေသွားပေါ်မှာပါ။ အဲဒါကို တစ်ဘက်လူက Offline message ပို့တယ်လို့လည်း ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမျိုးပေါ့
" ..... is offline. You can still send this person messages and they will receive them the next time they are online. "
ဒါပေမဲ့ msg နှစ်ခု သုံးခု ရပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ သူဟာ invisible လုပ်ပြီး chat နေတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်သွားပါလိမ့်မယ်။
နောက်တစ်နည်းအနေနဲ့ Gtalk labs edition ကို install လုပ်ပြီးတော့လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Labs Edition မှာ invisible လုပ်လို့ရပေမဲ့၊ မြန်မာစာရိုက်လို့မရပါဘူး။ နောက်ပြီး friend list ကို အားလုံးပေါ်အောင် scroll bar ထည့်ပေးမထားပါဘူး။ တစ်ခုကောင်းတာက Group Chat function ကိုတော့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Always Idle လုပ်ချင်ရင်တော့ ဒီမှာဖတ်ပါ။
How to put WebMinster Player in your blog
Cool site for Icon Lovers
Nice ebook for your CV
Cool sites for Photoshop Brushes
၆၁ ကြိမ်မြောက် အာဇာနည်နေ့
A stupid quarrel
Cool site for Linux User
ဂုဏ်ယူပါတယ် မချောအိမာန် (မန္တလေး)
Unseen Burma : An aid worker's story
Essential Sites for Tips and How-To’s